Sweden oo wax kabadaleyso Nidaamka Magangalyo Doonka
Thursday December 19, 2013 - 12:47:59 in Wararka by Web Admin
Dowlada Sweden ayaa amar ku siisay Laanta Socdaalka in ay baaritaan iyo dib u habayn Tobias Billström-somaliskaku sameeyaan nidaamka magangalyo doonka qaxootiga. Wasiirka Socdaalka Tobias Billström ayaa ujeedada go'aankaan ku tilmaamay
Dowlada Sweden ayaa amar ku siisay Laanta Socdaalka in ay baaritaan iyo dib u habayn Tobias Billström-somaliskaku sameeyaan nidaamka magangalyo doonka qaxootiga. Wasiirka Socdaalka Tobias Billström ayaa ujeedada go'aankaan ku tilmaamay mid la doonayo in lagu yareeyo waqtiga iyo qarashka ku baxa magangalyo doonka wadanka iska dhiiba. Migrationsverket ayaa laga doonayaa kama dambays bisha Oktobar 2014 in ay soo bandhigaan qorshe waadix ah oo qofka marka la diido si degdeg ah wadanka looga saarayo, halka qofka sharciga la siiyo si degdeg ah guri lagu dajinayo.
Wasiirka socdaalka ayaa dhibaatada ugu weyn ee haysata nidaamka magangalyada ku tilmaamay dadka sharciga loo diiday ee wadanka ku dhuumalaysanaya, kuwaasoo uu sheegay in ay qarashka ku kordhinayaan dowlada.
Sanadkii 2010 ayay dowlada Sweden samaysay qorshe midkaan la mid ah oo lagu yareeyay waqtiga ay qaadato baaritaanka magangalyo doonka iyadoo balan qaadku uu ahaa ugu badnaan 6 bilood balse hada ay qaadato muddo intaas ka badan.
Siyaasiinta Xil Doonka Ah "Ar Fahad Yaasiin ha la iigeeyo"
20/02/2017 - 18:50:15
Hoos udhac kuyimid tirada dadka iska soo dhiibaya dalka Sweden (Sawiro)
05/01/2017 - 12:27:20
Guddiga Qaban qaabada Doorashada Gudoonka Baarlamaanka oo la magacaabay (Aqriso Magacyada)
02/01/2017 - 00:07:30